Default KDE ၅.၈ ဖြင့်ရရှိနိုင်သည့် Linux Mint 18.2 "Sonya" Beta Edition Linux မှ
KDE 18.2 ဖြင့်ရရှိနိုင်သည့် Linux Mint 5.8 "Sonya" beta ထုတ်ဝေမှု
Luigys toro | | ဖြန့်ဝေ, NOTICIAS
ငါချစ်သောမေတ္တာသည်များစွာရှိ၏ Linux Mint, ငါကြာမြင့်စွာငါ့အဓိက distro ကို Arch Linux ကို (နှင့်အမျိုးမျိုးသောအနကျအဓိပ်ပါယျ) နဲ့ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး, ဒီအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ Linux ကိုအရသာထုတ်ဝေအသစ်ထွက်လာတိုင်းအခါတိုင်းငါသည်သင်တို့နှင့်အတူမျှဝေပါ။ ဤအချိန်ကအလှည့်ဖြစ်ခဲ့သည် Linux Mint 18.2 beta "Sonya"၎င်းသည် KDE, Cinnamon, Mate နှင့် Xfe တို့ကဲ့သို့ desktop environment များဖြင့်ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်သည်
Clement Lefebvre ကအစီရင်ခံခဲ့သည် တရားဝင်ပစ်လွှတ်ကြေငြာချက် ထုတ်ဝေမှုအသစ်၏ Linux Mint "Sonya" ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်အထိထောက်ပံ့မည်ဖြစ်ပြီးတိုးတက်မှုနှင့်အင်္ဂါရပ်အသစ်များတပ်ဆင်ထားသည်။
1 Linux Mint 18.2 "Sonya" ၏အင်္ဂါရပ်များ
2 Linux Mint 18.2 Beta "Sonya" ကိုဘယ်လို download ဆွဲမလဲ။
Linux Mint 18.2 "Sonya" ၏အင်္ဂါရပ်များ
အသစ်သောနှင့်တိုးတက်လာသော Linux Mint ၏အင်္ဂါရပ်များအနက်မှအောက်ပါတို့ကိုဖော်ပြထားသည်။
ပုံမှန် desktop ပတ်ဝန်းကျင်သည် Kubuntu အဖွဲ့မှထောက်ပံ့ထားသော KDE Plasma 5.8 ဖြစ်သည်။
သစ်ကြံပိုး၊ Mate နှင့် Xfe desktop ပတ်ဝန်းကျင်မူကွဲများတွင်ရနိုင်သည်။
Ubuntu 16.04.2 LTS (Xenial Xerus) ကိုအခြေခံသည်။
Linux 4.8 kernel ပါဝင်သည်။
Update manager ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း၊ operating system ကိုပြောင်းလဲခြင်းနှင့် OS အပေါ်သက်ရောက်မှုအရ updates များကိုသူတို့အဆင့်အတန်းပြောင်းလဲခြင်းတို့တွင်၎င်း၏ပေါ်လစီများကိုစုံလင်စေသည်။
ယခုအသစ်ပြောင်းခြင်းမန်နေဂျာသည်အခြားအရာများအတွက်စာရွက်စာတမ်းများအပါအ ၀ င်အကူအညီအချက်အလက်များပိုမိုပေးသည်။
Ubuntu HWE kernel များကို support kernel updates တွင်ထည့်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စံနှုန်းများနှင့်အညီအသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ပေးမည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည့် mintupdate-tool တစ်ခုပါဝင်ခြင်း။
အကောင့် root ကိုပုံမှန်အားဖြင့်သော့ခတ်ထားသည်။
packages များ marking အတွက် "markauto" နှင့် "markmanual" command များအတွက် apt ထောက်ခံမှု။
Linux Mint 18.2 Beta "Sonya" ကိုဘယ်လို download ဆွဲမလဲ။
သတိပြုသင့်သည်မှာ၎င်းသည် beta ဖြစ်သောကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အသုံးပြုခြင်းကိုမထောက်ခံပါ။ ကျွန်ုပ်၏အကဲဖြတ်ချက်အရ distro သည်တည်ငြိမ်ပြီး update manager အတွက်အပြောင်းအလဲများသည်အလွန်အောင်မြင်သည်ဟုအထူးသဖြင့်ခံစားမိသည်။
Linux Mint 18.2 Beta "Sonya" ကိုကူးယူရန်သင်မူရင်းမှတရားဝင် download url ကိုရယူနိုင်သည် ဒီမှာ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော desktop ပတ်ဝန်းကျင် (Cinnamon, KDE, Mate သို့မဟုတ် Xfce) ကိုရွေးချယ်နိုင်သောနေရာတွင်၎င်းတို့သည် 32-bit နှင့် 64-bit architecture အတွက်ဖြန့်ဝေသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » KDE 18.2 ဖြင့်ရရှိနိုင်သည့် Linux Mint 5.8 "Sonya" beta ထုတ်ဝေမှု
မကြာသေးမီက Linux Mint 18.1 KDE ကိုကျွန်ုပ် install လုပ်ခဲ့ပြီး System Monitor ကိုသွားသောအခါအောက်ပါစာ "/home/usuario/.local/share/ksysguard/ProcessTable.sgrd တွင်ခိုင်လုံသော XML မရှိပါ။ "
အဲဒါကို fix ဖို့သင်ကူညီနိုင်မလား?
ပထမ ဦး ဆုံး KDE ဖိုရမ်ကိုကြည့်ပါ
သတင်းကောင်း…။ BETA မရှိတော့သည့်အထိစောင့်ပါ
ဆာဂျီယို အဗီလာ ဟုသူကပြောသည်
ဒါဟာသူတို့အမြစ်ကိုသော့ခတ်ကြောင်းငါမြင်သောပထမ ဦး ဆုံး distro မဟုတ်ပါဘူး။ ဤအချက်၏ဆိုလိုရင်းကိုမည်သူမဆိုကျွန်ုပ်အားအနည်းငယ်အလင်းပေးသလား။ အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကပိတ်ဆို့သလဲ?
Sergio Avila ကိုပြန်ပြောပါ
သင်၏အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ERP နှင့် CRM တစ်ခုကိုအဆင့်ဆင့်လုပ်ဆောင်ရန်
Feather: အမျိုးမျိုးသောအသုံးပြုမှုများအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ Open Source icon pack